FBI-da oo baahisay xog cusub: Sacuudiga ma ku lug lahaayeen weeraradii 9/11? | Biyoguurenews.com
Home Wararka FBI-da oo baahisay xog cusub: Sacuudiga ma ku lug lahaayeen weeraradii 9/11?
FBI-da oo baahisay xog cusub: Sacuudiga ma ku lug lahaayeen weeraradii 9/11?
WASHINGTON — FBI-da Mareykanka ayaa Sabtidii soo saartay macluumaadkii ugu horreeyay ee lala wadaago dadweynaha Mareykanka kaas oo la xiriira baaritaankii 11-kii Sebtember 2001, weeraradii lagu qaaday Mareykanka iyo eedeymaha ku aaddan taageerada dowladda Sacuudiga ee afduubayaashii diyaarahada.
Previous articleLaascaanood oo lagu dilay nin xildhiban gole degaan ah
Next articleXaamid Mir: Sheekadii saxafi Pakistan u dhashay oo saddex jeer waraystay Usaama Bin Laadin